အရှင်ဆေကိန္ဒကို ဖူးခွင့်ရလို့ ဝမ်းသာနေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
ကိုခန့်စည်သူ နဲ့ ဒီဇိုင်နာ မပုံ့တို့နဲ့အတူ ဖူးခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ခိုင်သင်းကြည်က အနုပညာရှင် မောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ ခန့်စည်သူ. ဒီဇိုင်နာ မပုံ့ တို့နဲ့အတူ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒကို ဖူးမျှော်ခွင့်ရတဲ့အပေါ် ဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်
ခိုင်သင်းကြည်က အနုပညာရှင် မောင်နှမတွေနဲ့ အတူ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒကို ဝတ္ထုကပ်ခွင့် ဖူးခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဝမ်းသာပီတိစကားတွေကို အခုလို ပြောပြလာပါတယ်. သူမနဲ့အတူ မိသားစုဝင်များ မိတ်ဆွေများ အပြင် အနုပညာ မောင်နှမဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူ နဲ့ ဒီဇိုင်နာ မပုံ့ တို့လည်း ပါဝင်တာ ကို တွေ့ရပါတယ်
'' ဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းအရှင်ဆေကိန္ဒကိုဖူးခွင့်,ဝထ္ထုကပ်ခွင့်ရပြီး ချစ်သောသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံစားသောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ရှင်'' ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင် ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီ က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ခိုင်သင်းကြည်ဟာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အားတက်သရော ဆောင်ရွက်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနေရင်တောင်မှ ဘုရား၊ တရားကို မရ ရတဲ့အချိန်မှာ ပဌာန်းရွတ်၊ ပုတီးစိပ်၊ ၇ ရက်ရက် သားသမီးတိုင်း၊ သတ္တဝါတိုင်း ကို မေတ္တာပို့ နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်.
အဲ့ဒီနောက်ခိုင်သင်းကြည် က မင်းသမီး တစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အပြင်ကာရိုက်တာအကြောင်းကိုလည်း Duwun Media အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမြဲတမ်း သွက်သွက်လက်လက် နေတတ်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ မတူတဲ့ အရာတွေကို ပြောပြလာတာပါ။
'' အပြင်မှာနေတာက အမြဲတမ်း အစားနဲ့ ပါးစပ်နဲ့ မပြတ်အောင် စားနေမယ်။ ပေါက်ကရ ရှစ်သောင်းတွေပြောနေမယ် အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ ဂနာမငြိမ်တဲ့အမာစိန်ပေါ့နော်'' ဆိုပြီးတော့ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က '' မိန်းမကြမ်းကြီး များ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကန်တော့ပွဲမှာ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
ခိုင်သင်းကြည်က လက်ရှိမှာ '' မိန်းမကြမ်းကြီးများဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သမီးလေး စံထိပ်ထား နဲ့အတူ TV ကြော်ငြာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေရိုက်ကူး နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေး စံထိပ်ထားဦးကိုလည်း လက်ရှိမှာ စာကြိုးစားစေ ချင်တာကြောင့် သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို လက်တွဲ မခေါ်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Photo: Aye Zaw Moe
ခိုင်သင်းကြည် Khine Thin Kyi